Tuniziyaa Keessatti Uummanni Mormii Dhagesisee Jira
Fulbaana 27, 2021
Lammiwwan Tuniziyaa kuma hedduun Dilbata kaleessaa hiriira bahan
Lammiwwan Tuniziyaa kuma hedduun Dilbata kaleessaa hiriiruun prezidaant Kaaiis Saiid aangoo qabachuu isaanii morman.Mufannaa jabaan kan irratti mullate hiriira kana irratti prezidaantichii aangoo akka gadhiisaniif gaafatan.
Saiid torban kana heera bara 2014 ba’e irra hedduu foyyeesuun erga mummicha ministeeraa aangoo irraa ari’anii baatii lama booda, akkasumas paarlaamaa hojii dhaabsisuun of aangoo walii galaa dhunfatan.
Hiriirtoonni gama isaanii kun yaaliin fonqoolchaa waan ta’eef akka kufuu barbaanna jechuun sagalee dhageesiisan.
Hiriira wal fakkaatuu bara 2011gaggeeffame bulchiinsa prezidaantiicha duraanii barri aangoo isaanii akka xumuuramu taasisuun ni yaadatama.
Sa’iid akka jedhanti, tarkaanfiin fudhadhee akka mormiitonni koo jedhan sana fonqoolcha mootummaa miti. Laamsha’uu gama siyaasaa fi dinagdee jabeessee akkasumas deebii dadhabaa kan weerara vaayrasii Koronaaf kennamaa jiru, foyyeessuuf malee jedhan.
Mirga nama maraa nan eegsiisa malee abbaa irraa hin ta’u jechuun waadaa seenan.
Ba’iin Filannoo Jarmanii Eegamaa Jira